२० करोडको ऋण काण्डले सांग्रिला विकास बैंकमा लफडा, राष्ट्र बैंक झुक्याउन सीइओको चरम बदमासी – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७७ कार्तिक २ गते १९:०७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीभिजन टोली २०७६ सालको पहिलो त्रैमासमा आफ्नो गेटै बाहिर रहेको सांग्रिला विकास बैंकमा स्थलगत निरीक्षणका लागि गयो ।
निरीक्षणका क्रममा २० करोड रुपैयाँको एउटा ऋणको फाइलमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको नजर पुग्यो ।
बैंकले २०७५ कात्तिक १३ गते लक्ष्मी खड्का सञ्चालक रहेको आर एन सप्लायर्सलाई १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको थियो ।
उक्त ऋणका लागि बत्तिसपुतलीको भित्री गल्लीमा रहेको कित्ता नम्बर ३२९, ३३१, ३३२, ३३४ कित्ता नम्बर हरको ८१०.६६ वर्गमिटर अर्थात् साढे २५ आना धितो राखेको थियो ।
आनाको १ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले धितो राखिएको उक्त जग्गाको कूल मूल्यांकन ३० करोड रुपैयाँ गरियो । र, बैंकले खड्कालाई १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गर्यो ।
केही वर्ष अघिदेखि सांग्रिलाले खड्काको नयाँ बानेश्वरस्थित घरमा आफ्नो शाखा राखेर सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
बानेश्वर शाखाकी घरबेटीले सांग्रिलाबाट बत्तिसपुतलीको जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिएकी थिइन् । ऋण लिएका दिनदेखि खड्काले बैंकलाई सावाँ र ब्याजको किस्ता तिरिनन् । तर पनि बैंक व्यवस्थापनले ऋण असूलीको कुनै प्रक्रिया शुरु गरेन ।
यो फाइल देख्नेवित्तिकै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु झस्किए ।
बत्तिसपुतलीको भित्री गल्लीको जग्गाको बजार मूल्य नै आनाको १ करोड रुपैयाँ पर्दैन । बढी परे आनाको ५० देखि ७०/७५ लाख रुपैयाँ पर्छ । सामान्यतया बैंकहरुले गर्ने मूल्यांकन सरकारी मूल्यभन्दा बढी र चलनचल्तीको बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यांकन गर्छन् । तर, त्यसो गरेन सांग्रिलाले ।
बैंकले प्रतिआना १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर यति ठूलो रकम ऋण दिएको देखेर स्थलगत निरीक्षणमा खटिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गंभीर प्रश्न उठाए ।
बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठलगायतले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई कन्भिन्स गर्न खोजे ।
तर राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीरुले उक्त कर्जाको फाइलमाथि प्रश्न उठाउँदै स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारे । राष्ट्र बैंकले उक्त ऋण तत्कालै प्रोभिजन गर्न निर्देशन पनि दियो ।
राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भएर पनि १० जिल्ले बैंकको जत्रो कारोबार गर्ने बैंकले एउटै ग्राहकलाई २० करोड ऋण कसरी र किन दियो ? आगामी दिनमा सम्बन्धित निकायले यसबारे थप अनुसन्धान गर्लान् नै ।
तर, महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने बैंकले दिएको यो ऋण उठेको छैन । बरु यसले थप समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले उक्त ऋणमा प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएपछि बैंकका सीइओ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार प्राभिजनिङ गरेर आफ्नो गल्ती सच्याउन लाग्नु पर्ने हो ।
तर सांग्रिलाका सीइओ श्रेष्ठले त्यसो गरेनन् । राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न सेटिङमा थप गलत काम गर्न थाले । जसले बैंकलाई झन् झन् बढी जोखिममा धकेलेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकले जम्मा १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जबकी उक्त ऋणको प्रोभिजनिङ गर्नु परेको भए बैंकको नाफा ऋणात्मक हुने थियो । यसरी बैंकको नाफा ऋणात्मक हुन नदिने सीइओ श्रेष्ठले अर्को हर्कत गरेर जोखिम बढाएका छन् । वित्तीय विवरणमा नक्कली नाफा देखिए पनि भित्रभित्रै बैंक भने खोक्रो बन्दै गएको छ ।
लक्ष्मी खड्काले ऋण नतिरेपछि उक्त ऋणको फाइल उठाउने एक कर्मचारीलाई सीइओ श्रेष्ठले कारबाही गरे । यतिसम्म कि चरम दबाब दिएर राजीनामा नै गर्न लगाए ।
उक्त ऋणमा सीइओ श्रेष्ठको पनि हस्ताक्षर छ । तर उनले आफू जोगिन सम्बन्धित शाखाका प्रबन्धकलाई कारबाही गरे ।
स्मरण रहोस् वाणिज्य बैंकका अधिकांश सीइओहरुको एक्लैले ऋण दिनसक्ने सीमा १० देखि १५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । सांग्रिला जस्तो सानो बैंकमा सीइओको संलग्नता वा प्रत्यक्ष निगरानीबिना कुनै पनि कर्मचारीले ५० लाख रुपैयाँसम्म पनि ऋण दिन सक्दैनन् । यसको चुरो कुरा राष्ट्र बैंक र सांग्रिलाकै सञ्चालक समितिले पक्कै पनि बुझेकै हुनुपर्छ ।
प्रोभिजन गर्दा नाफामा गंभीर असर पर्ने भएपछि सीइओ श्रेष्ठले सेटिङ मिलाएर राष्ट्र बैंक झुक्याउन पनि सफल भए ।
लक्ष्मी खड्काको उक्त धितो रहेको जग्गा दिलकुमार श्रेष्ठलाई बिक्री गरिन् । बैंकमा धितो रहेको जग्गा ऋणीले कसरी अर्कोलाई बिक्री गर्न मिल्छ ?
अहँ मिल्दैन । ऋण लिँदाको बखत नै बैंकले धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति मालपोतमा रोक्का गरेको हुन्छ । उक्त ऋण नतिरेसम्म बैंकले रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुक्का गर्दैन ।
तर रोक्का रहेको सम्पत्ति लक्ष्मी खड्काले कसरी श्रेष्ठलाई बिक्री गर्न सफल भइन् ? सामान्य मान्छेले पनि यसपछिको नियत बुझ्छ ।
दिलकुमार श्रेष्ठको सेक्युुर्ड हस्पिटालिटीले २०७६ पुस मसान्त अर्थात् पुस २९ गते बत्तिसपुतलीको सोही जग्गा धितो राखेर सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबाटै २० करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको छ ।
यहाँनेर गंभीर कुरा के छ भने १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण दिनका लागि फाइल उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरेको बैंक उच्च व्यवस्थापनले सोही धितोमा २० करोडको ऋण स्वीकृत गर्यो ।
ऋण लिएकै दिनदेखि दिलकुमार श्रेष्ठले पनि बैंकलाई सावाँब्याजको किस्ता तिरेनन् । तर किस्ता नतिर्ने श्रेष्ठलाई बैंकले ०७७ असार २९ गते थप ९८ लाख रुपैयाँ ऋण दियो । सीइओ श्रेष्ठले प्रोभिजन गर्नुपर्ने ऋणमा थप ऋण दिएर इभरग्रिनिङ गरिरहेका छन् ।
बुटवलको अचिभर्स एकेडेमीलाई दिएको १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋणमा पनि सीइओ श्रेष्ठले यस्तै बदमासी गरेका छन् ।
बैंक भनेको सर्वसाधारण जनताले खाइनखाइ गरेर दुःख गरेर कमाएको पैसा जम्मा गर्छन् । यसरी जनताले राखेको पैसामा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र स्वाथ्र्यका लागि बैंकका सीइओ र उच्च व्यवस्थापनले कुन हदसम्मको हर्कत गछर्न् भन्ने एउटा बलियो उदाहारण हो सांग्रिलाको यो प्रकरण ।
आम लगानीकर्ता, सञ्चालक समिति र नियामक राष्ट्र बैंकको आँखा छल्न बैंक व्यवस्थापनले उही धितोमा अर्को ऋणी खडा गरेर बैंकको बासलातमा नक्कली नाफा देखाउँछन् भन्ने प्रमाण पनि यो प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
सर्वसाधारण जनताको पैसाले चल्ने बैंक जस्तो विश्वासीलो संस्थाका एउटा जागिरेले त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कम्पाउन्ड जोडिएको घरमा कार्यालय राखेर यो हदसम्मको हर्कत गरेर भित्रभित्रै बैंकलाई खोक्रो बनाउँदासम्म पनि नियामक र बैंकका सञ्चालकहरु आँखामा कालोपट्टी बाँधेर बस्नुचाहीँ अर्को अस्वाभाविक विषय हो ।
असार मसान्तको विवरण अनुसार साग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ६० करोड छ । गत वर्ष १८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बैंकले नाफा गरेको थियो ।
बैंकमा २८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने कर्जा २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ कर्जा दिएको छ ।
सुयोग श्रेष्ठ सीइओ बनेर आएपछि प्रवाह गरिएको झन्डै १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीको ऋणमा कुनै न कुनै प्रकारको समस्या देखिएपछि सञ्चालकहरु झस्किएका छन् ।
‘सुयोगजीको प्रफर्मेन्स एकदमै कमजोर भयो । तर उहाँले आफ्नो प्रफर्मेन्स देखाउन वित्तीय विवरणमा नक्कली नाफा सिर्जना हुने काम गरि बैंकलाई धरासायी बनाउँदै लग्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘हामी एक्सन लिने तयारीमा छौं ।’
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकमा वेथितिः फसेको ऋण उठाउन घरबेटीलाई ७६ लाख रुपैयाँ अग्रिम भाडा !